रहेनन् कृष्णमान गुभाजु, अक्सिजन अभावले निधन - Samadhan News
समाधान संवाददाता २०७८ वैशाख २४ गते १२:५५
कृष्णमान गुभाजुले वैशाख १६ गते आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्, ‘२०७८÷१÷१०गते साँझदेखि ज्वरोको कारण आराम गरिरहेकोमा हिजो १५ गते बुधबार पिसिआर चेक गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हुँदा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
गुभाजुको उक्त पोस्टमा धेरै शुभेच्छुकले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै कमेन्ट लेखेका छन् । पोखराको व्यावसायिक र सामाजिक क्षेत्रका सक्रिय गुभाजुलाई शुभेच्छुकहरुले लेखेका थिए, छिटो निको हुन्, भगवानले सधैं रक्षा गरुन् । तर ती सबै शुभेच्छाका बाबजुद कृष्णमानलाई भगवानले आफ्नो प्रिय बनाएका छन् । बिहीबार राति कृष्णमानको स्वर्गारोहण भएको उनका भतिजा डा. सञ्जीव गुभाजुले जानकारी दिए ।
पोखराकै चरक मेमोरियल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका उनलाई मंगलबार हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं लगिएको थियो । ‘काठमाडौंका कुनै हस्पिटलमा पनि बेड नपाएपछि भक्तपुर लगेका थियौं,’ डा. सञ्जीवले भने । भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलको सघन उपचार कक्षमा उपचार हुँदाहुँदै राति साढे ९ बजे कृष्णमानले अन्तिम सास लिएका थिए ।
‘दिउँसोसम्म काका ठिकै हुनुहुन्थ्यो,’ सञ्जीवले भने, ‘हातहरु चलाइरहनुभएको भिडियो पनि साथीले पठाएका थिए, राति पो तपाईंको बिरामीलाई गाह्रो छ, कोरोना हस्पिटल लैजानुपर्छ भनेर फोन आयो ।’ लगत्तै सञ्जीवले अस्पतालका चिकित्सकहरुसँग सोधपुछ गरेका थिए । ‘अक्सिजन सर्टेज भएको हो, २० मिनेटमा आउँछ होला भन्नुभयो,’ सञ्जीवले सुनाए, ‘अक्सिजन सकिएपछि मात्रै हामीलाई खबर भयो ।’ काठमाडौंका अरु अस्पतालहरुमा अक्सिजन अभाव भएको भन्नै कतै नसुनेको सञ्जीवले बताए ।
६२ वर्षका कृष्णमानलाई उच्च रक्तचापको समस्या थियो । पोखराबाट काठमाडौं लैजाँदा पनि उनलाई फेसमास्क लगाई अक्सिजन दिँदै हेलिकोप्टरमा लगिएको थियो ।
एक महिनाअघिमात्रै काठमाडौंमा उनले फुडबडी चेक गराएका थिए । त्यस बेला सबै ठिकठाकै रहेको रिपोर्ट आएको थियो । तर वैशाख दोस्रो साता उनलाई एक्कासि कोरोना भाइरस संक्रमण भयो । तर, कहाँबाट कसरी संक्रमण भयो भन्ने खुलेको छैन ।
पोखराको मोहोरिया टोलका स्थायी बासिन्दा कृष्णमानले आफ्नै ठाउँमा कृषकञ्चन ज्वेलरी नाममा सुनचाँदी पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । कञ्चन क्यापिटल प्रालि पनि उनी प्रवद्र्धित कम्पनी हो ।
उनी सुनचाँदी व्यवसायी संघ पोखराका पूर्वअध्यक्ष हुन् । धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उनी निकै सक्रिय रहँदै आएका छिमेकी तथा आफन्त उत्तममान बुद्धाचार्य सम्झन्छन् । उनका अनुसार कृष्णमान अहिले काहुँडाँडामा निर्माणाधीन धर्मकाय बुद्ध मण्डल समितिका कोषाध्यक्ष थिए ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित रक्त सञ्चार केन्द्रमा दाताहरुका तर्फबाट कृष्णमानले युवा बौद्ध संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए ।
रोटरी क्लब अफ अन्नपूर्णका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कृष्णमानले विश्व शान्ति स्तूप सञ्चालन समितिमा २ कार्यकाल सचिव भएर काम गरे । समितिमै आवद्ध बुद्धाचार्य भन्छन्, ‘स्तूप स्थापनाकालदेखि नै उहाँ निकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ।’ धर्मशीला बुद्ध विहार नदीपुरको ज्ञानमाला संघ र दायक सभाका पूर्वअध्यक्ष कृष्णमान युवा बौद्ध संघ र धर्माेदय सभाका सल्लाहकारसमेत हुन् ।
बौद्धमार्गी कृष्णमानको अन्तिम संस्कार भने नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार नेपाली सेनाबाट हुने भएको छ । स्वर्गीय कृष्णमानका श्रीमती २ छोरा र १ छोरी छन् । बिरामी श्रीमान्लाई लिएर काठमाडौं गएकी उनकी श्रीमतीलाई शुक्रबार एम्बुलेन्समा पोखरा ल्याइँदैछ । उनको पूरै परिवार आइसोलेसनमा बस्नेछ ।